Inkinga yefundo yesikolo - omunye izinkinga esiphuthumayo besikhathi sethu. State Uhlelo "Ezemfundo. Ukraine ka ngekhulu xxi." "Umqondo wokuthi imfundo yezingane kanye nentsha, kazwelonke ohlelweni lwezemfundo", "National Emfundisweni kwezemfundo ngekhulu xxi ku Ukraine." kanye namanye amaphepha emvume Ukugcizelela orientation kazwelonke yesimanje. Kulo mongo, kuyaphawuleka imibono Pedagogical of ezivelele uthisha Ukrainian K. D. Ushinskogo, umbono wakhe ngale okuqukethwe yefundo yesikolo.
ifa enezici nguthishela, wafunda ngokuningiliziwe ososayensi. Nokho, umbono Ushinsky ukuqeqeshwa nokwenza, ubuyekeza okuqukethwe wezemfundo, imibuzo ka kubaluleka kwavelonkhe e tindlelanchubo imfundo abantu bahlale bemazi, zidinga ukunakekelwa enemininingwane. Ngakho-ke, inhloso yokutadisha kwethu iwukuba sihlaziye ifa Pedagogical Ushinskogo imibono yayo phezu okuqukethwe yefundo yesikolo.
Ngesisekelo zabo zemfundo izinhlelo usosayensi ukubeka umqondo wemfundo ubuzwe, ucabangela ukuthi ingane kusukela zisencane kufanele zamukele izakhi esikweni lesizwe, ukufunda ngolimi lwabo lwendabuko ngokusebenzisa izimpawu yobuhlanga uphawu uhlelo ngokusebenzisa nesiko labo, temdzabu.
Ushinsky wafakazela ukuthi ngale ndlela imfundo, imfundo yengane kanjalo kusenta sibe nengqondo, izimfanelo abalulekile zokuziphatha, eba imizwa kazwelonke futhi abonisa ukushisekela izwe. Ngo isihloko esithi "AboMdabu Igama" Ushinsky waqaphela ukuthi kwakubalulekile ukuba nolimi kukamama ngemva nesimiso esiyisisekelo imfundo kazwelonke wengane, embiza ngokuthi "umfundisi omkhulu kazwelonke", "lo mqeqeshi kazwelonke enkulu," "ubalekela lapho nolimi lwabantu abavamile - abantu khona".
Emibhalweni yakhe, "Indoda njengoba isihloko kwezemfundo", "Umama Ulimi" "Umsebenzi inani layo ezingokwengqondo zemfundo", "Umhlaba Wezingane" nabanye. Mfundisi adunyiswe Folk pedagogy, wabiza balifundisise futhi olunzulu nesipiliyoni wokufundisa abantu.
Qaphela ukuthi isebenza ikhasi equkethe amasampula best of temdzabu: izaga, amazwi, izinto eziyindida, olunamagama amaningi okunzima ukuwabiza, iculo, Folk yezinganekwane, njll ..
Ushinsky yalwela ilungelo yemvelo yesizwe ukuba ngamunye abe nabafazi siqu esikoleni kazwelonke, kazwelonke nesimiso salo semfundo. Kulesisimo-ke, kuyafaneleka ukunaka umsebenzi "Ngo isidingo sokwenza esikoleni Russian Russian" lapho umlobi okuqukethwe, logic of isethulo ubiza ngokusebenzisa "pre-emptive, olubanzi izifundo lenkaba" futhi wenze Ukrainian Ukrainian esikoleni Ukrainian ngesisekelo Ukrainian izifundo ulwazi. Ngakho-ke, ukuqeqeshwa kuyadingeka ukuze ngilakhe, ikakhulukazi uma sicabangela izici kazwelonke izingane, indlela yokudala kwinhlangano wokusebenza zokudala-search, benaka ukuthuthukiswa esikoleni umlando wendawo.
I ifa bokubeka Ushinsky azigcina inani layo ngoba isayensi yesimanje Pedagogical, lapha sithola abaningi amalungiselelo, okuyinto, ngokuba ayisisekelo, ukusiza ukuqonda kangcono ubuntu bengane, laba kanjani nesandla ukukhetha kahle ngezindlela sokuthuthuka, ubuyekeza okuqukethwe wezemfundo esikoleni ngesisekelo kazwelonke.
I Coefficient komugqa ukunwetshwa - kungenzeka ukubala zonke
Umklami Cathedral of St Peter. I nomklami oyinhloko we Cathedral of St Peter
Amapaneli e-Wall yokugeza - ukuthembeka nokulula
Ingxoxo yokuzifundela - ingxoxo ... yokuzifundela: definition, izici nezibonelo
Ibhekwa wezokudla for amadoda "Vuk Vuk ': yokusetshenziswa
IBhodi umdlalo ngezandla zakhe: ukujabulisa, ukufundisa, basize
Indlela ukudweba ibhuloho izingane kanye nabantu abadala: amathiphu namasu